१८ वर्ष सेवा गरेका एक टेलिभिजनकर्मीको पीडा : ‘जागिर खोसियो न पारिश्रमिक पाइयो, न सेवा सुविधा’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
१८ वर्ष सेवा गरेका एक टेलिभिजनकर्मीको पीडा : ‘जागिर खोसियो न पारिश्रमिक पाइयो, न सेवा सुविधा’
ललितपुरका विष्णु बस्नेतले २०६० सालमा क्यामेरा पर्सनको रुपमा एभिन्युज नेटवर्क प्रालि(तत्कालीन एभिन्युज टेलिभिजन प्रालि)मा काम सुरु गरे । काम सुरु गरेको दुई महिनापछि उनलाई स्थायी नियुक्ति दियो । काम थालेको चार-पाँच वर्षपछि उनलाई पुनः करारको नियुक्ति थमाइयो । श्रम ऐनविपरीत करारको नियुक्ति दिँदा पनि उनले काम जारी राखे ।
२०७७ सालमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेका बेला नेपालमा पनि लकडाउन भयो । लकडाउनलगत्तै उनलाई फोर्स लिभ बस्न लगाइयो । चैत बैशाख बिदा बसे । प्रेस रिजस्ट्रार र पत्रकार महासंघको पहलमा उनी काममा फर्किए । तर, व्यवस्थापनको व्यवहार भने फेरिएन । उनलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भइरहयो ।
अहिले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र बनेको छ । संक्रमण व्यापक बन्दै गएपछि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । पहिलो महामारीमा फोर्स लिभमा रोखको टेलिभिजन व्यवस्थापनले उनलाई कामबाटै निकाल्यो । बस्नेतकाअनुसार विना कुनै कारण उनलाई अवकासको पत्र थमाइयो । ‘पोहोरदेखि दुःख दिइरहेको व्यवस्थापनले यो पटक काबाटै निकाल्यो,’ उनले भने, ‘किन कामबाट निकालिएको भन्दा कुनै कारण देखाइएन । करार नवीकरण हुननसक्ने भनेर पत्र थमाइएको छ ।’
चैत १८ बाट कामबाट निकालिएका बस्नेतलले गत असारदेखिको पारिश्रमिकमेत पाएका छैनन् । १८ वर्ष टेलिभिजनमा सेवा गरेका बस्नेतले सञ्चय कोषबावत् काटिएको रकमसमेत पाएका छैनन् । नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान पनि पाएका छैनन् ।
‘पहिलो कुरो मलाई करार सेवाको कर्मचारी भन्नै मिल्दैन । सुरुमै स्थायीमा काम सुरु गरेको हु,’ उनले भने, ‘सुरुमा स्थायी दिएर पछि करार भन्ने हुँन्छ र ? यो त श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनविपरीत छ ।’
श्रम अदालतमा मुद्दा
नियमविपरीत कामबाट निकालिएको र पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत नपाएपछि बस्नेत अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । बैशाख १६ गते उनले श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनर्बहालीको माग गर्दै निवेदन दिएको छन् । उनको निवेदनसमेत दर्ता (२८४) भइसकेको छ । निवेदनमा उनले आफूलाई कानुनविपरीत कामबाट निकालिएकोले पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।
अवकास गर्ने टेलिभिजन व्यवस्थापनको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेका छन् । टेलिभिजनको मानव संशाधन विभागले अवकासको पत्र थमाएको भन्दै मानव संशाधन विभागले अवकास दिनै नसक्ने जिकिर निवेदनमा छ । त्यस्तै सुरुमा स्थायी नियुक्ति पाएर काम थालेको भए पनि पछि करार भनि दिएको नियुक्ति पनि कानुनसम्वत नभएको जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै सन्चार प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, उपदान र सञ्चय कोष बापतको रकमसमेत नदिएको निवेदनमा उल्लेख छ । कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सबै ससेवा सुविधा दिलाइदिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।
के भन्छ टेलिभिजन व्यवस्थापन ?
हामीले एभिन्युज टेलिभिजनका व्यवस्थापन हेर्ने मिलन श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्यौं । विष्णु बस्नेतको बारेमा बुझ्न खोज्दा उनले भने, ‘म अहिले बिरामी भएर बेड रेस्टमा छु । अलिसमय पछि कुरा गर्छु ।’ उनले यस विषयमा पन्छिन खोजेपछि टेलिभिजन व्यवस्थापनको कुरा समेत समेट्ने हाम्रो प्रयास बिफल भयो ।
यो केटिएम दैनिकको विशेष स्तम्भ हो । मिडिया, पत्रकार र यससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित यो स्तम्भ प्रत्येक साताको मङ्गलवार प्रकाशन हुनेछ ।
नकुदौँ जागिर जाने डर, कुदौँ प्रशासनको हप्कीदप्की
राजीनामा दिएको वर्षौसम्म पनि पाउँदैनन् पत्रकारले बक्यौता पारिश्रमिक
आफ्ना पीडा लुकाएर अरूका दुःख उजागर गर्ने सञ्चारकर्मी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, पुस २१ २०७८ १८:५९:२४
न्यायका लागि कलम चलाउने पत्रकार नै अन्यायमा !
रोकिएको पारिश्रमिक पाउनैका लागि श्रम गर्न बाध्य पत्रकार !
महासंघ चुनावः दलीय उम्मेद्वारसामु किन घुँडा टेके व्यवसायिक भनिएका पत्रकार ?